Xan Ebook Store｜အသင်းဝင်ပုံစံ
»TOP > အသင်းဝင်စည်းကမ်းချက်အတည်ပြုမှု > အသင်းဝင်ပုံစံ
※စာလုံးအရေအတွက် ၈လုံးမှ ၃၂လုံးအတွင်းသာ
--- Ayeyarwady (Irrawaddy) Bago Chin Kachin Kayah Kayin (Karen) Magway Mandalay Mon Rakhine (Arakan) Sagaing Shan Tanintharyi Yangon
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 ---- 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 နှစ် -- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 လ -- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ရက်
Xan IT Solutions Co.,Ltd နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အကြောင်းအရာများ
Xan IT Solutions Co.,Ltd. (ဤမှနောင်တွင် “Xan” ဟု ရည်ညွှန်းပါမည်) သည် ebook.xan.com.mm ဝက်(ဘ်)ဆိုက်အား ထူထောင်၍ အမျိုးအစားစုံလင်သော ဒီဂျစ်တယ်(လ်)စာအုပ်(e-book) များကို အများတကာ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်စေရန်အတွက် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။
Xan IT Solutions Co.,Ltd. အား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားရှိပြီး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်မှာ ……………………. ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းကို အဆောင် (၁၈)၊ (၇) လွှာ၊ Myanmar ICT park ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Xan ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ
Xan မှ ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ဝယ်ယူသည့်စာအုပ်များကို သုံးစွဲသူ(user)မှ ကိုယ်ပိုင်သိမ်းဆည်းခွင့်၊ Xan ဝက်(ဘ်)ဆိုက်စာမျက်နှာတွင် Xan ၏ အသင်းဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုခွင့်၊ Personal Computer, Tablet, Smart-phone, Mobile device စသည်များကို အသုံးပြု၍ ဖတ်ရှုနိုင်မည့် သက်ဆိုင်ရာဆော့ဖ်ဝဲများ အခမဲ့ရယူနိုင်ခွင့် နှင့် Xan မှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ (ဤမှနောင်တွင် “ဝန်ဆောင်မှုများ” ဟု ရည်ညွှန်းပါမည်) ပါဝင်ပါသည်။
Xan သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ Xan ဝက်(ဘ်)ဆိုက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် သုံးစွဲသူ(user) နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဒီဂျစ်တယ်(လ်)စာအုပ် (e-book) များကို သုံးစွဲသူများက ရယူဖတ်ရှုနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ Xan ဝက်(ဘ်)ဆိုက်စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ (visitor) များ အနေဖြင့်လည်း Xan တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသောအသင်းဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် Xan ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူသုံးစွဲသူများအပေါ် တရားဝင် စည်းနှောင်မှုရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ Xan ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူသုံးစွဲသူတိုင်း (ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ (visitor) ဖြစ်စေ၊ Xan ၏ အသင်းဝင် (Member) ဖြစ်စေ) သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန် သဘောတူညီကြပြီး ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပါသည်။ ဤမှနောင်တွင် “သုံးစွဲသူ” ဟု ရည်ညွှန်းဖော်ပြချက်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူကိုဖြစ်စေ၊ Xan ၏ အသင်းဝင်ကို ဖြစ်စေ ဆိုလိုပါသည်။
Xan ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသည့်အခါ သုံးစွဲသူသည် ဤတွင်ဖော်ပြပါရှိသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီပါသည်။ အကယ်၍ သုံးစွဲသူအနေဖြင့် ဤတွင်ဖော်ပြပါရှိသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် ဆန္ဒမရှိပါက Xan ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူအသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
သုံးစွဲသူသည် မိမိကိုယ်တိုင်အတွက် ဤသဘောတူစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လက်ခံသဘောတူညီနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာရှိသူဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ယူအာမခံပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုရယူသုံးစွဲမည့်သူသည် အောက်ပါအချက်များကို တာဝန်ယူလိုက်နာရပါမည်
Xan ၌ အသင်းဝင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအားလုံး ဖြည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြရာတွင် မှန်ကန်တိကျမှုရှိကြောင်း၊ (သုံးစွဲသူသည် မိမိ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ အပါအဝင်)
အသက် (၁၆) နှစ် ပြည့်ပြီးသူ (မြန်မာနိုင်ငံကလေးသူငယ်ဥပဒေ (၁၉၉၃) အရ ကလေးသူငယ် မဟုတ်သူ) ဖြစ်ကြောင်း၊ (အကယ်၍ သုံးစွဲသူသည် မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအရ ကလေးသူငယ်ဖြစ်ကြောင်း Xan မှ စိစစ်တွေ့ရှိရပါက အဆိုပါသုံးစွဲသူ၏ အသင်းဝင်မှတ်တမ်း (account) အား တစ်စုံတစ်ရာ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း မပြုဘဲ ပိတ်သိမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။)
သုံးစွဲသူအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ရယူအသုံးပြုခြင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊
Xan ၏ စည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့သဖြင့် အသင်းဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲထုတ်ပယ်ခံရဘူးသူ မဟုတ်ကြောင်း။
သုံးစွဲသူသည် အထက်အပိုဒ်ပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲ အသင်းဝင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင် လာကြောင်း သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါက Xan ၏ အသင်းဝင်အဖြစ် လက်ခံမှု မပြုခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်စဲထုတ်ပယ်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အသင်းဝင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်း
Xan သည် အသင်းဝင်တစ်ဦး၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အောက်ပါကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးပြု မည် ဖြစ်ပါသည်-
ဝယ်ယူသည့်စာအုပ်များအတွက် အတည်ပြုခြင်း၊ ရယူသုံးစွဲခွင့်ပြုခြင်း၊
ဝယ်ယူသည့်စာအုပ်မျာအတွက် ငွေတောင်းခံခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊
Xan ၏ အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လိုအပ်သည်များအတွက် သုံးစွဲသူထံ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
Xan သည် ၄င်းထံသို့ သုံးစွဲသူများက ပေးအပ်ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိစေရန် တင်းကျပ်သော လုံခြုံရေးအစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ထားရှိပါသည်။ ဥပဒေအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်မှအပ သုံးစွဲသူမှ အတိအလင်းသဘောတူထားခြင်းမရှိလျှင် အဆိုပါသုံးစွဲသူ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အခြားတတိယပုဂ္ဂိလ်၊ အဖွဲ့အစည်းထံသို့ ထုတ်ဖော်အသိပေးမည် မဟုတ်ပါ။
သုံးစွဲသူ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ သုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး ငွေပေးချေမည့်ဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းအပါအဝင် Xan ၏ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ရည်ရွယ်၍သာ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Xan ၏ အသင်းဝင်တစ်ဦးအဖြစ် Xan ဝက်(ဘ်)ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်သည့်အခါ သုံးစွဲသူတွင် အသုံးပြုသူအမည်နှင့် စကားဝှက်များ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူတစ်ဦးလျှင် အသင်းဝင်မှတ်တမ်းတစ်ခုသာ ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ အသုံးပြုသူအမည်နှင့် စကားဝှက်များ၏ လုံခြုံမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်မှာ သက်ဆိုင်ရာ သုံးစွဲသူ၏တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူသည် မည်သည့်အခါတွင်မဆို အခြားသူ၏ အသုံးပြုမှတ်တမ်း၊ အသုံးပြုသူအမည် သို့မဟုတ် စကားဝှက်များကို သုံးစွဲခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။ အလားတူ မိမိ၏ သုံးစွဲသူအမည်နှင့် စကားဝှက်တို့ကိုလည်း အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား အသုံးပြုခွင့် မပေးရပါ။ ထိုသို့ အလွဲသုံးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အကျိုးဆက်များအတွက် အဆိုပါသုံးစွဲသူအပေါ်တွင် တာဝန်ရှိမည် ဖြစ်သည့်အပြင် Xan မှ အဆိုပါသုံးစွဲသူ၏ အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းအား ယာယီသော်လည်းကောင်း၊ အမြဲတမ်းသော်လည်းကောင်း ပိတ်သိမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အထက်အပိုဒ်ပါ အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက သုံးစွဲသူအနေဖြင့် Xan ၏ ကြိုတင် သဘောတူခွင့်ပြုချက် မရရှိဘဲ အသင်းဝင်အဖြစ် ထပ်မံမှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
သုံးစွဲသူသည် စာအုပ်မှာယူရန်အတွက် Xan ၏ အသင်းဝင်အဖြစ် ဦးစွာ မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူသည် မိမိမှာယူလိုသည့် စာအုပ်ကို ရွေးချယ်လျက် စာအုပ်ဘေးရှိ “ဝယ်ယူမည်” ဟူသည့်နေရာကို နှိပ်ရ ပါမည်။ ဝယ်ယူလိုသည့်စာအုပ်အားလုံးအား ထိုသို့ပြုလုပ်ပြီးပါက “ငွေပေးချေမည်” ဟူသည့်နေရာကို ဆက်လက်နှိပ်ပြီး ငွေပေးချေခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရပါမည်။ ထိုနေရာတွင် ဝယ်ယူမှုအား ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုပါက “ပြင်ဆင်လိုသည်” ဟူသည့်နေရာကို နှိပ်၍ ဝယ်ယူလိုသည့်စာအုပ်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်အားလုံးကို ဖြည့်စွက်ဖော်ပြပြီးပါက မှာယူသည့်စာအုပ်များအတွက် “ယခုငွေပေးချေပါမည်” ဟူသည့်နေရာကို နှိပ်ပြီး ဝယ်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူသည် ငွေပေးချေရန် အတည်ပြုပြီးပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း သုံးစွဲသူ အနေဖြင့် Xan ၏ ဝက်(ဘ်)ဆိုက်တွင် စာအုပ်များကို အကြိမ်ကြိမ်ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
သုံးစွဲသူသည် Xan မှ စာအုပ်များအား ဝယ်ယူရာတွင် ရှင်းလင်းမှုမရှိပါကလည်းကောင်း၊ Xan နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခြားသိရှိမေးမြန်းလိုသည်များအတွက်လည်းကောင်းXan ဝက်(ဘ်)ဆိုက်စာမျက်နှာရှိ “စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပုံစံ” တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့်အတိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာစာအုပ်အလိုက် ဈေးနှုန်းများကို ပူးတွဲဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုဈေးနှုန်းများတွင် သုံးစွဲသူအပေါ် ကျသင့်မည့် သက်ဆိုင်ရာအခွန်များ ပါရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စာအုပ်ဈေးနှုန်းများသည် အခါအားလျော်စွာ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။
Xan ၏ ဝန်ဆောင်မှု ရယူသုံးစွဲခြင်းအတွက် ဝက်(ဘ်)ဆိုက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြသတ်မှတ်ထားသော သက်ဆိုင်ရာ အခကြေးငွေများကိုလည်း သုံးစွဲသူမှ ပေးချေရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
ဝယ်ယူရောင်းချခြင်း နှင့် ငွေပေးချေခြင်း
Xan ဝက်(ဘ်)ဆိုက်မှ စာအုပ်များအား ဝယ်ယူဖတ်ရှုရာတွင် ငွေပေးချေခြင်းအား MyanPay/YPay/MPU/ Ooredoo/ PayPal/ Visa/ MasterCard သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်း တစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ပေးချေရန် သဘောတူပါသည်။ ထိုသို့ပေးချေရာတွင် (၁) ငွေစာရင်းကတ်ပြားပေါ်ရှိ မိမိ၏ အမည်၊ (၂) ငွေစာရင်းကတ်အမျိုးအစား၊ (၃) ငွေစာရင်းကတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့ရက်၊ (၄) ငွေတောင်းခံလွှာပေးပို့ရမည့်လိပ်စာ၊ (၅) ငွေစာရင်းကတ်ပြား၏ ကုတ်နံပါတ် နောက်ဆုံးဂဏန်း(၄)လုံး စသည်များကို ဖြည့်သွင်းပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Xan သည် ငွေသားဖြင့်ပေးချေခြင်း၊ ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ပေးချေခြင်း၊ အခြားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ပေးချေခြင်းများကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ Xan မှ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ထားသည့် စာအုပ်ဆိုင်မှသာလျှင် တဆင့်လက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေပေးချေမှုကို စာအုပ်အား ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် ပေးချေရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ငွေပေးချေပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာစာအုပ်အား ချက်ချင်း ရယူဖတ်ရှုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ရယူဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် သုံးစွဲသူအနေဖြင့် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု ကောင်းမွန်ရန်နှင့် စာအုပ်များအား ဖတ်ရှုနိုင်မည့် သက်ဆိုင်ရာဆော့ဖ်ဝဲများ ရှိရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူသည် ဝယ်ယူထားသည့်စာအုပ်အား ဖတ်ရှုရာတွင်လည်းကောင်း၊ download ဆွဲယူရာတွင်လည်းကောင်း အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ငွေတောင်းခံလွှာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကွဲလွဲမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက စာအုပ်ဝယ်ယူသည့်နေ့မှ (၇) ရက်အတွင်းတွင် Xan ၏ ဖုန်းသို့ခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် အီးမေးလ် ဖြင့် အကြောင်းကြား၍လည်းကောင်း အခက်အခဲ သို့မဟုတ် ကွဲလွဲမှုအား အပြည့်အစုံဖော်ပြ၍ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
ဝယ်ယူသည့်စာအုပ်တွင် ချို့ယွင်းပျက်စီးမှုများရှိပါက ကောင်းမွန်သောစာအုပ်ဖြင့် ပြန်လည်လဲလှယ် ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူသည် ဝယ်ယူထားသည့်စာအုပ်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုဖြစ်စေ၊ အားလုံးကိုဖြစ်စေ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည်မှအပ ထပ်မံမိတ္တူကူးယူ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ အကျိုးစီးပွားအလို့ငှာ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း မပြုလုပ်ရ။
Xan ဝက်(ဘ်)ဆိုက် တွင် တင်ပြရောင်းချသည့်စာအုပ်များ၏ မူပိုင်ခွင့်မှာ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများ၏ လက်ဝယ်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိပါသည်။
Xan တွင် စာအုပ်အချက်အလက် တစ်စုံတစ်ရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်မှအပ မူပိုင်ခွင့်တစ်စုံတစ်ရာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိပါ။ ထိုစာအုပ်အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များမှာ သက်ဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အချက်အလက်များ ဆိုရာတွင် စာသားများ၊ စာတွဲများ၊ စာအုပ်ဒီဇိုင်းနမူနာများ၊ ပုံများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များ၊ အသံများ၊ စာပေလက်ရာများ ပါဝင်ပါသည်။
Xan အသင်းဝင်တစ်ဦးဦးသည် မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာများကို ချိုးဖောက်ကြောင်း မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ဆိုင်သူ သို့မဟုတ် ၄င်း၏ ကိုယ်စားလှယ်က Xan သို့ အကြောင်းကြားလာသည့်အခါ ထိုအသင်းဝင်သည် Xan ၏ အသင်းဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲခံရမည့်အပြင် အဆိုပါချိုးဖောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အကျိုးဆက်အသီးသီးအတွက်လည်း တာဝန်ရှိစေရမည်။ ထိုသို့ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ခံရကြောင်း အကြောင်းကြားမှုတွင် မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ခံရသည့် အချက်အလက်အား ပြည့်စုံစွာ ရှင်းလင်းဖော်ပြလျက် မိမိ၏လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ စသည်တို့နှင့်တကွ Xan ၏ အောက်ပါလိပ်စာသို့ အကြောင်းကြားရမည်
အဆောင် (၁၈)၊ (၇) လွှာ၊ Myanmar ICT park ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
အီးမေးလ် - contact@xan.com.mm
Xan သည် ရောင်းချသူတင်ပြသော စာအုပ်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ရောင်းချသူတင်ပြသော စာအုပ်များသည် Xan ကြောင့် ပျက်စီးချို့ယွင်းမှုမရှိကြောင်း အာမခံပါသည်။ အကယ်၍ Xan ကြောင့် ပျက်စီးချို့ယွင်းမှုရှိပါက ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ စာအုပ်ပါ စာသားအချက်အလက် မှားယွင်းခြင်း၊ စာသားများ မပြည့်စုံခြင်း၊ စာအုပ် EPub၊Pdf ဖိုင် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအားနည်းခြင်း၊ စာအုပ်အရွယ်အစား၊ အရောင်စသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် Xan တွင် တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ (စာအုပ်ရောင်းချသူအား Xan ဝက်(ဘ်)ဆိုက် တွင် တင်ပို့ရောင်းချသည့်အခါ ထိုစာအုပ်အား သုံးစွဲသူမှ အဆင်ပြေစွာ ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် အကောင်းဆုံးတည်းဖြတ် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်စေရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက် စေမည် ဖြစ်ပါသည်။)
Xan တွင် ဖော်ပြရောင်းချသော စာအုပ်များသည် ပျက်စီးချို့ယွင်းမှု မရှိကြောင်း အာမခံပါသည်။ အကယ်၍ ပျက်စီးချို့ယွင်းမှုရှိကြောင်း သုံးစွဲသူက အကြောင်းကြားလာလျှင် (၁၄) ရက်အတွင်း သုံးစွဲသူအပေါ် ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာ ထပ်မံကုန်ကျစေခြင်း မရှိစေဘဲ ကောင်းမွန်သောစာအုပ်ဖြင့် ပြန်လည်အစားထိုး လဲလှယ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Xan သည် အင်တာနက် သို့မဟုတ် ဝက်(ဘ်)ဆိုက် သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲဆိုင်ရာ နည်းပညာပြဿနာများအတွက် တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ထို့နည်းတူ Xan ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူသုံးစွဲရာတွင် သုံးစွဲသူ၏ ကွန်ပျူတာပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်ပျက်စီးစေမှုအတွက်လည်း တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားချက်မှအပ Xan ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူသုံးစွဲမှုကြောင့် သုံးစွဲသူတွင် လည်းကောင်း၊ အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိုလည်းကောင်း တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်း၊ ဆုံးရှုံးစေခြင်းများအတွက် Xan တွင် တာဝန်တစ်စုံတစ်ရာ ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
သုံးစွဲသူသည် သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို ချိုးဖောက်လျက် Xan ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲခြင်းကြောင့် အခြားသူတစ်ဦးဦးတွင် နစ်နာဆုံးရှုံးမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာပါက သုံးစွဲသူသည် ထိုကိစ္စရပ်အတွက် Xan အပေါ်တွင် တာဝန်တစ်စုံတစ်ရာမရှိစေရန်အပြည့်အဝ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုအချို့ကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ရန်အလို့ငှာ သုံးစွဲသူအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဆော့ဖ်ဝဲများကို လက်ခံရယူရမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း သီးခြား လိုက်နာဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူအနေဖြင့် မိမိရွေးချယ်သောဝန်ဆောင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သီးခြားလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် အခြားနည်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင် ထိုသီးခြားစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ဤစည်းကမ်းသဘောတူညီချက်တွင် ပါဝင်စေရမည်ဖြစ်သည်။
ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် သီးသန့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များအကြား ကွဲလွဲမှုရှိခဲ့လျှင် အဆိုပါ သိီးသန့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များက လွှမ်းမိုးစေရမည်။
Xan သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို အခါအားလျော်စွာ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ ပြင်ဆင်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များသည် (၁) Xan မှ ၄င်း၏ဝက်(ဘ်)ဆိုက် တွင် ပြင်ဆင်ချက်အား ဖော်ပြပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုများအား ပထမအကြိမ်စတင် အသုံးပြုသော သုံးစွဲသူအသစ်များအပေါ် စတင် အသုံးပြုသည့်အချိန်တွင်လည်းကောင်း၊ (၂) မူလသုံးစွဲသူများအပေါ်တွင် Xan မှ ၄င်း၏ ဝက်(ဘ်)ဆိုက် တွင် ပြင်ဆင်ချက်အား ဖော်ပြပြီးနောက် ရက်ပေါင်း (၁၅) ရက် ပြည့်သည့်အခါတွင်လည်းကောင်း၊ (၃) Xan ၏ အသင်းဝင်များအတွက် ပြင်ဆင်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသော အီးမေးလ်ကို သက်ဆိုင်ရာအသင်းဝင်ထံ ပေးပို့ပြီးနောက် ရက်ပေါင်း (၁၅) ရက် ပြည့်သည့်အခါတွင်လည်းကောင်း၊ (၄) ပြင်ဆင်ချက်ပြုပြီး နောက်တွင် အသင်းဝင်ဖြစ်လာသူများအတွက် ထိုသို့အသင်းဝင်ဖြစ်သည့် အခါတွင်လည်းကောင်း စတင်အကျိုးသက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသဘောတူစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သည်သုံးစွဲသူမှ Xan ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူသုံးစွဲနေသည့် ကာလတစ်လျောက် သို့မဟုတ် Xan ၏ အသင်းဝင်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေသမျှ ကာလတစ်လျောက် အကျိုးသက်ရောက်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူသည် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို မိမိ၏အသင်းဝင် မှတ်တမ်းအား ဖျက်သိမ်းနိုင်သည့်အပြင် အသင်းဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်လိုပါက “အသင်းဝင်အဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ခြင်း”စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ရပ်စဲပြီးသော်လည်း ဤတွင် ဖော်ပြ ပါရှိသည့် စည်းကမ်းချက်အပိုဒ်( ၆) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှု နှင့် (၁၁) မူပိုင်ခွင့် တို့မှာ သုံးစွဲသူအပေါ် ဆက်လက်အကျိုးသက်ရောက်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူသည်ထိုသို့ရပ်စဲလိုက်ခြင်းဖြင့် Xan ၏အသင်းဝင်အချက်အလက်ပြောင်းလဲခြင်း စာမျက်နှာတွင်မိမိ၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ Xan ၏ စာမျက်နှာတွင် တင်ပြထားသော မိမိ၏အကြောင်းအရာ များ ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့လည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိနားလည်ပါသည်။ ထိုသို့ သုံးစွဲသူ၏ အချက်အလက်များကို Xan ၏ ဝက်(ဘ်)ဆိုက်စာမျက်နှာမှ ပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Xan တွင် တာဝန်တစ်စုံတစ်ရာ ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
ဤသဘောတူစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများနှင့်အညီ လွှမ်းမိုးသက်ရောက်စေရမည်။
Xan နှင့် သုံးစွဲသူအကြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက ပထမဦးစွာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြားငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါက ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသော တရားရုံးတစ်ခုခုတွင် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
Xan နှင့် သုံးစွဲသူတို့အကြား ဆက်နွယ်ဆောင်ရွက်မှုသည် ဖက်စပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပြုမူခြင်း၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားကဲ့သို့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်း မရှိစေရမည့်အပြင် ထိုသို့ ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးလည်း မရှိစေရ။
Xan သည် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထွေထွေအကြောင်းကြား အသိပေးခြင်းများကို ဝက်(ဘ်)ဆိုက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ သုံးစွဲသူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ စာရေးသားပေးပို့လျက်လည်းကောင်း ( အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး ဝက်(ဘ်)ဆိုက်မှ အကြောင်းကြားခြင်းများအတွက် (၇၂)နာရီ ပြည့်ပြီးနောက်တွင်လည်းကောင်း၊ အီးမေးလ်ဖြင့် အကြောင်းကြားလျှင် (၂၄) နာရီ ပြည့်ပြီးနောက်တွင်လည်းကောင်း လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
သုံးစွဲသူများမှ Xan သို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားရာတွင် အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်း အသုံးပြုပေးပို့ ဆောင်ရွက်ရမည် -
လိပ်စာ ………….. အဆောင် (၁၈)၊ (၇) လွှာ၊ Myanmar ICT park ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
အီးမေးလ် ………… contact@xan.com.mm
မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွား ခြင်း၊ မိီးဘေး၊ ရေဘေး၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ စစ်ဖြစ်ပွားခြင်း၊ သပိတ်မှောက်ခြင်း၊ပြည်တွင်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပွားခြင်း၊နိုုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အခြား အလားတူတားဆီး၍မရသော အဖြစ်အပျက်များ ပါဝင်ပါသည်။
၂။ Xan သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူသည်အထက်ပါ မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုခု ကြောင့် ၄င်းတို့၏ တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ထိုပျက်ကွက်မှုအတွက် ၄င်းတို့အပေါ်တွင် တာဝန် တစ်စုံတစ်ရာ မရှိစေရ။ ထိုသို့ မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုခု ပေါ်ပေါက်လာပါက ထိုဖြစ်ရပ်အသေးစိတ်ကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအပြန်အလှန် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြား အသိပေးရမည်။
အသင်းဝင်တစ်ဦးသည် မိမိရရှိသော Xan ၏ ဝန်ဆောင်မှု တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုဖြစ်စေ၊ အားလုံးကိုဖြစ်စေ အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးခွင့် မရှိပါ။
Xan သည် အောက်ပါအခြေအနေများ ပေါ်ပေါက်လာလျှင် ၄င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ယာယီရပ်ဆိုင်းထားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားရမှုနှင့် ၄င်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည့် အကျိုးဆက်များအတွက် Xan အပေါ်တွင် တာဝန်တစ်စုံတစ်ရာ ရှိစေမည် မဟုတ်ပါ
ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်လာခြင်း၊
မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုခု ပေါ်ပေါက်ခြင်း၊
နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်အရသို့မဟုတ် ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်အရ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားရခြင်း၊
ဤတွင်ဖော်ပြပါရှိသည့် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်မှာ အခွင့်အာဏာရှိသော တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ တရားမဝင်ခြင်း၊ အတည် မဖြစ်ခြင်းများရှိပါက အခြားသောစည်းကမ်းချက်များကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရဘဲ ဆက်လက် အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။
"လက်ရှိစာအုပ်ဆိုင်တွင် ဝယ်ယူနိုင်သည့်စာအုပ်များသာ ဖော်ပြထားသည်။"
ဖော်ပြမှုအဆင့် ၂ ဖော်ပြမှုအဆင့် ၁ ဖော်ပြမှုအဆင့် ၀
Building 18, 7th Floor, Myanmar ICT Park, Hlaing Township, Yangon, Myanmar
© Copyright 2018 All rights reserved by Xan IT Solution | xan.com.mm